आपराधिक जगतका जालिम मियाँ : जसले प्रचण्डलाई छाडी केपी ओलीलाई नै किन रोजे ! | शुभयुग
आपराधिक जगतका जालिम मियाँ : जसले प्रचण्डलाई छाडी केपी ओलीलाई नै किन रोजे !
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ पौष ८, बिहिबार (६ महिना अघि)
१५७९ पाठक संख्या
विरगंज – पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्यास गरी आज नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् ।
बिहिवार जगरनाथपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मियाँलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । मियाँ माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको वेला मियाँलाई भारतीय मिडियाहरूले भारतविरोधी करार गरेको थिए । मियाँले आफ्नो घरमा शंकास्पद कोरोना संक्रमित मुस्लिमहरूलाई आश्रय दिएको र भारतमा घुसपैठ गराउन खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए । उनीमाथी भारतविरोधी क्रियाकलाप गरेको भन्दै बिभिन्न आरोप लागदै आएको छ । यसअघी उनीलाई भारतले मोस्ट वान्टेडको सुचीमा समेत राखेको थियो । यद्धपी हालसम्मपनि उनको नाम मोस्ट वान्टेडको सुचीबाट हटाएको छैन ।
यस्तो छ जालिम मियाँको इतिहास
भारतको गुप्तचर विभागले भारतमा कोरोना संक्रमण फैलाउने षडयन्त्रको इनपुट दिएको जालिम मियाँ वास्तवमै अत्याचारी हुन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम आज तकका अनुसार भारत र नेपालको सीमामा जति पनि अनैतिक कामहरू भइरहेका छन् सो कामको मास्टरमाइन्ड जालिम नै हुन् । उनीमाथि आरोप छ कि कोरोना संक्रमित मानिसहरूलाई भारत पठाएर उनी भारतमा विनाश फैलाउन चहान्छन् ।
गुप्तचर स्रोतका आधारमा भारत-नेपाल सीमामा तैनाथ एसएसबीले बिहारको पूर्वी र पश्चिम चम्पारण जिल्ला अधिकारीलाई यस बरेमा सूचित गरेको छ। जिल्ला अधिकारीले जिल्ला एसपीलाई पत्र पठाएको छ। जालिम मियाँको भारततर्फ चालबाजीको लामो इतिहास छ।
भारतको सीमावर्ती शहर रक्सौलसँगै जोडिएको नेपाल शहर दशकौंदेखि जालिम मियाँको आतंकले ग्रस्त छ। काठको तस्करीबाट सुरु गरेर, जलिम मियाँलाई आईएसआईको आदेशमा भारतीय नक्कली नोटको कारोबारदेखि लिएर एक हिन्दूवादी नेताको हत्यासम्मको आरोप छ ।
जालिम मियाँलाई पाकिस्तानी नागरिकहरू नेपालको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम धार्मिक बस्ती इजतिमाको बहानामा नेपाल बोलाउन र भारतको निजामुद्दीन क्षेत्रमा अवस्थित मार्कजमा नेपाली परिचयपत्र पठाएको आरोप पनि छ। अपराधलाई राजनीतिक पर्दाले लुकाएका जालिम मियाँलाई पूर्वप्रधानमन्त्री एंवम सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समर्थन रहेको उल्लेख छ ।
जालिम मियाँ कुनै समयमा प्रतिबन्धित काठको तस्करीका कारण हिरासतमा पनि बसेका थिए । उनी भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरूको नजरमा थिए जब पाकिस्तानबाट आएका नक्कली नोटहरू नेपालका आईएसआई ह्यान्डलर युनुस अन्सारीको आदेशमा भारत पठाउन थालिसकेका थिए। उनको निकटका व्यक्तिहरू नक्कली नोटसहित पक्राउ पर्न थाले पछि उनी केही वर्ष भूमिगत पनि भए ।
यसैबीच, जब नेपाल पुलिसले आईएसआईको सञ्चालक यूनुसलाई पक्राउ ग-यो र गुप्तचर एजेन्सीहरूले भारत विरोधी कार्यकर्ताहरूको सामना गर्न थाले, तब जालिम आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादीमा सामेल भए। राजनीतिक शक्ति देखाउनको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर जालिमले बोलाएको आज तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
जालिममाथि हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको पनि आरोप छ। पुलिसले जालिमलाई यस हत्याको मुद्दामा पक्राउ ग-यो र धेरै महिनासम्म हिरासतमा राख्यो। उनी पछि धरौटिमा रिहा भएका थिए । यसैबीच, नेपालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा उनले माओवादीको टिकटमा प्रतिस्पर्धा गरे र भारतीय सिमानामा पर्ने नेपालको जगन्नाथ पुर गाउँको प्रमुखमा निर्वाचित भए ।
यस वर्ष १५ देखि १७ जनवरी बीचमा नेपालको सप्तरी जिल्ला ताब्लिगी जमातमा मुस्लिमहरूको ठूलो जमघट भएको थियो । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, खाडी देशलगायत १८ देशका मुस्लिमहरूको सहभागिता रहको थियो । करीव साढे दुई देखि तीन लाख मानिसहरूले यसमा भाग लिएका थिए र यसको मुख्य अतिथि वक्ता नयाँ दिल्लीको निजामुद्दीन मार्काज मस्जिदका मौलाना साद थिए ।
यसभन्दा पहिले नेपाल सरकारले सुरक्षा उल्लेख गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि नेपाल, भारत र अरु देशहरुबाट मुस्लिमहरुलाई फिर्ता पठाउने शर्तमा कार्यक्रम गर्नका लागि अनुमति दिइयो ।
तर, पाकिस्तानबाट नेपाल आएका पछि नेपालमा नै रहेको पुष्टि भएको थियो । जालिम मियाँले ती सबैलाई आश्रय दिएका थिए । जब भारतमा तबलीगी जमातको मुद्दा आयो भारतमा पनि अफरातफरी मच्चियो । सबै मुस्लिमहरू विभिन्न मस्जिदहरूमा लुकेका थिए । नेपाल प्रहरीले छापा मारेको छ र ५० भन्दा बढी पाकिस्तानी धर्मगुरुलाई हिरासतमा लिएको छ । जालिम मियाँको घरबाट ११ पाकिस्तानी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।